रवीन्द्रलाई सम्झदै आठराईः ‘न भुल्न मिल्ने, न सम्झनै मन लाग्ने’ « Mechipost.com
रवीन्द्रलाई सम्झदै आठराईः ‘न भुल्न मिल्ने, न सम्झनै मन लाग्ने’
प्रकाशित मिति: १५ फाल्गुन २०७६, बिहीबार १८:०९
फिदिम, १५ फागुन
पटक–पटक आश्वासन पाएपनि विमानस्थल निर्माण हुने सङ्केत फेला नपर्दा तेह्रथुमको आठराई गाँउपालिकाका स्थानीयवासी दिग्दार भइसकेका थिए । “अरुले भन्थे आठराई त प्रधानमन्त्रीको जन्मथलो हो । विमानस्थल नबन्ने कुरै छैन्”, चुहानडाँडा विमानस्थल निर्माण सरोकार समितिका सचिव रामचन्द्र थपलिया सम्झनुहुन्छ, “तर हामी भने आजित थियौँ ।” तर आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ को बजेटमा सरकारले विमानस्थल निर्माण सम्भाब्यता अध्ययन तथा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) निर्माणका लागि बजेट छुट्टयाएपछि स्थानीयमा विमानस्थल निर्माण हुने आशा पलाएको थियो ।
०७५ फागुन १५ गते तत्कालीन संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्ड्ययन मन्त्री रवीन्द्र अधिकारी विमानस्थल निर्माण गर्न लागिएको आठराई गाउँपालिका–६ चुहानडाँडा आइपुग्नुभयो । उहाँलाई विमानस्थल निर्माण समितिका अध्यक्ष एवम् प्रदेशसभा सदस्य तेजमान कन्दङ्वा, आठराई गाउँपालिकाका अध्यक्ष मानबहादुर लिम्बू लगायतले स्वागत गर्नुभयो । हँसिलो मुद्रामा उपस्थित अधिकारीले आफूहरु निर्माणको कुरा गर्न नभई निर्माण अघि बढाउन आठराई आएको वताउनुभएको थियो । उहाँले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चुहानडाँडा विमानस्थलको निर्माणबारे विस्तृत अध्ययन गर्न लगाउनुभएको स्मरण गर्दै भन्नुभएको थियो, “हामीले अध्ययन गरिसकेको वताएपछि प्रधानमन्त्री ज्यूले एक पटक पर्यटन मन्त्री आफैँ गएर चुहानडाँडा हेरेर आउनु भन्नुभएकाले यहाँ स्थलगत अध्ययन गर्न आएका हौँ ।”
प्रधानमन्त्रीको जन्मथलो भएकाले मात्रै नभई सबै हिसाबले चुहानडाँडा विमानस्थल निर्माणका लागि उपयुक्त भएको उहाँले वताउनुभएको थियो । उहाँले सरकार यहाँ विमानस्थल बनाउन प्रतिवद्ध रहेको वताउनुभएको थियो ।
कसलाई के थाहा एक घण्टा नवित्दै यस्तो दुःखद् दुर्घटना हुन्छ भन्ने ? अधिकारीले सम्बोधनको वीचैमा भन्नुभएको थियो “पानी परेको छ । मौसम खराब भएकाले फर्कनु पर्नेछ ।” उहाँले अस्थिरता र अब्यवस्थाबाट फाइदा लिएकाहरुले केही भएन् भनेर कराइरहेको वताउनुभएको थियो । उहाँले देशैभर आवश्यकताका आधारमा विमानस्थल निर्माण र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको रुपमा रुपान्तरण गरिने वताउनुभएको थियो ।
तर विमानस्थल निर्माणको सुनिश्चितताले खुशीयालीमा रमाइरहेका आठराईवासीको खुशी एक घण्टा पनि टिकेन् । यही विमानस्थलको अनुगमनका लागि आउनुभएका अधिकारीको ताप्लेजुङमा दुर्घटनामा परी निधन भयो । सरोकार समितिले आयोजना गरेको कार्यक्रम तथा विमानस्थल निर्माण क्षेत्रको अनुगमन नै दिवङ्गत अधिकारीको अन्तिम कार्यक्रम रह्यो ।
“हामी त खुशीले रमाइरहेका थियौँ । तर हामीलाई खुशी दिन आउनुभएका मन्त्री अधिकारीको सोही दिन निधन भयो”, सरोकार समितिका थपलियाले भन्नुभयो, “अब, न भुल्न मिल्छ, न त त्यो दुःखद् दिन सम्झन मन लाग्छ ।”
दिवङ्गत मन्त्री अधिकारीसँगको साक्षात्कार र क्षणभरमै सुनिएको दुर्घटनाको खवरले लामो समय दिग्भ्रमित तुल्याएको तेह्रथुम बहुमुखी क्याम्पस चुहानडाँडाका प्राध्यापक गोविन्द सुवेदीको भनाई छ । “समृद्ध नेपाल निर्माण गर्ने दृढ इच्छाशक्ति बोकेको युवा नेतृत्वलाई गुमाएको अनुभूति भइरहेको छ” सुवेदीले भन्नुभयो ।
अरु पूर्वाधार निर्माण भएपछि विमानस्थल बन्न लागेको होइन्, यहाँ । बरु विमानस्थल बन्ने सुनिश्चितताले यो सुन्दर पहाडको पुनर्जीवनको आशा पलाएको थियो । तेह्रथुम सदरमुकाम म्याङलुङबाट ६५ किलोमिटरको दुरीमा रहेको यो दुर्गम गाँउपालिका पुष्पलाल (मध्यपहाडी) लोकमार्ग निर्माण भएपछि छिमेकी जिल्ला पाँचथरसँग कालोपत्रे सडकले जोडिएको थियो ।
पछिल्लो पटक चुहानडाँडामा विमानस्थल निर्माणका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) निर्माण भएको छ । वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको काम समेत अघि बढेको सरोकार समितिले जनाएको छ । विमानस्थल निर्माणका लागि चालु आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा रु. २५ करोड बजेट पनि छुट्टिएको छ । चार महिनाअघि यहाँ आइपुग्नुभएका संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्ड्ययन मन्त्री योगेश भट्टराई चाँडो भन्दा चाँडो चुहानडाँडा विमानस्थल निर्माण गर्नुपर्ने दबाव रहेको वताउनुभएको थियो ।
“मेरो प्रिय मित्र रवीन्द्र अधिकारीको निधनले पनि यो विमानस्थल निर्माणको कार्य चाँडो सुरु गरेर निर्धारित समयमै पूरा गर्नुपर्ने दबाव छ”, भट्टराईले भन्नुभयो, “यो विमानस्थल निर्माण गरेर उहाँले देख्नुभएको एउटा सपनालाई पूरा गर्नुछ ।”
नागरिक उड्ड्ययन प्राधिकरणका महानिर्देशक राजन पोखरेलका अनुशार आर्थिक वर्ष २०७३÷०७४ मा आठराई विमानस्थलको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार भइसकेको छ । विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनमा ९२७ मिटर लम्बाईको धावन मार्ग निर्माण गर्न ४४८ रोपनी जग्गा आवश्यक पर्ने उल्लेख छ । विमानस्थल निर्माणका लागि रु. ८५ करोडको लागत आवश्यक हुने प्रतिवेदनले देखाएको छ । विमानस्थल निर्माणबाट यहाँका १४ घर परिवार विस्थापित हुने सरोकार समितिका सचिव थपलियाले जानकारी दिनुभयो ।
केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री चयन भएपछि आठराई उहाँको पुख्र्यौली थलोको रुपमा चर्चामा आयो । उहाँबाहेक शीर्षस्थ राजनीतिज्ञ सीपी मैनाली, कृष्णप्रसाद सिटौला, राधाकृष्ण मैनालीको पुख्र्यौली थलो भएकाले पनि आठराई सधैँ चर्चामै छ । पूर्वी पहाडमा सामाजिक, राजनीतिक परिवर्तनको अगुवाई गरेको आठराई क्षेत्र विकास र स्थानीयको आर्थिक अवस्था परिवर्तनका दृष्टिले निकै पछि परेको छ । आठराई गाँउपालिकाका चुहानडाँडा, छातेढुङ्गा, थोक्लुङ लगायत स्थानमा विद्युत, खानेपानी, सिंचाई लगायतको अभाव छ ।
प्रशासनिक कामकाज ०७३ सालबाट यहाँको सक्रान्तिबजारमा रहेको इलाका प्रशासन कार्यालयबाट हुन सुरु भएपनि न्यूनतम पूर्वाधारको अभावमा यहाँका स्थानीयवासी बसाई सर्ने क्रम अझै रोकिएको छैन । यहाँ रहेको पूर्वी पहाडकै अग्रणी शैक्षिक संस्था तेह्रथुम बहुमुखी क्याम्पसमा विद्यार्थीको संख्या घट्दो छ ।
यहाँ विमानस्थल निर्माण हुनसके आठराई क्षेत्रको मुहार फेरिने आठराई गाँउपालिकाकी उपाध्यक्ष रुपा कन्दङ्वाको विश्वास छ । “विमानस्थलले अरु पूर्वाधारहरुको पनि सुनिश्चितता गर्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ”, उपाध्यक्ष कन्दङ्वाले भन्नुभयो, “ब्यापारिक चहल पहल पनि बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ ।” स्थानीयवासी कृष्णप्रसाद ओली विमानस्थल निर्माणले आठराईले बाहिर चर्चा भएजस्तै स्थानमा पुर्याउने विश्वास ब्यक्त गर्दै चाँडो निर्माण कार्य सुरु हुनुपर्नेमा जोड दिनुहुन्छ ।
तीन जिल्लावासीले लिन सक्छन फाइदा
आठराईमा विमानस्थल निर्माण हुनसके तेह्रथुम जिल्लाका अतिरिक्त पाँचथर र ताप्लेजुङका स्थानीयले लाभ लिन सक्छन । पाँचथर सदरमुकाम फिदिमबाट यहाँ पुग्न करीब ४५ मिनेट समय लाग्दछ । कालोपत्रे सडक निर्माणमा भइसकेपछि तेह्रथुमको म्याङलुङबाट करीब डेढ घण्टामा आठराई पुग्न सकिन्छ ।
यस्तै निर्माणाधीन तमोर कोरिडोर पूर्ण भएपछि ताप्लेजुङ सदरमुकाम फुङलिङबाट करीब डेढ घण्टामा यहाँ पुग्न सकिन्छ । तीन जिल्लाको केन्द्र विन्दूमा रहेकाले आठराई विमानस्थल निर्माण हुनेमा शंका नरहेको भन्दै मन्त्री भट्टराईले स्थानीयवासीलाई आश्वस्त तुल्याउनुभएको थियो ।